Fepetra fisorohana :: Miato indray ny tsena isan-kerinandro eto an-drenivohitra • AoRaha
Nandray fanapahan-kevitra hentitra amin’ny fampiatoana indray an’ireo tsena isan-kerinandro eto an-drenivohitra ny sampan-draharaha misahana ny fitantanana ny tsena ao amin’ ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA). Voakasik’ izany ny tsenan’Andravoahangy sy ny tsenan’i Mahamasina ary ny tsenan’ny 67Ha.
Hisy ny fanadiovana ny tsena amin’ny famendrahana ranompanafody aorian’ny amin’ny 12 ora. Mifanome tanana amin’ ny CUA ny sampana mpamonjy voina sy ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (BMH). Ny tsena mivarotra ireo entana ilaina andavanandro (PPN) sy ireo fanafody no afaka misokatra. Afaka manao ny fivarotany saingy tsy eny rehetra eny kosa ny mpivarotra arontava, fa hatao mifanakaiky amin’ ny mpivarotra izay mahazo alalana manao ny asany.
“Iharan’ny fanagiazana avy hatrany ny entana amidin’ireo minia mandika izao fandaminana izao. Mila mailo ihany koa ny mpivarotra momba ireo olona misoloky ho mpiasan’ny kaominina eny amin’ny tsena”, hoy Randrianarisoa Rija, talen’ ny tsena ao amin’ny CUA. Mandray ny fitarainana avy amin’ireo izay niharan’izany fisolokiana izany ny talen’ny tsena.